१० तस्विरमा हेर्नुहोस्, यस्तो छ नेपालगञ्जमा प्रादेशिक महोत्सव, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
१० तस्विरमा हेर्नुहोस्, यस्तो छ नेपालगञ्जमा प्रादेशिक महोत्सव
नेपालगञ्ज । फागुन १९ गतेदेखि नेपालगन्जको सडक डिभिजन कार्यालय कारकाँदोमा सञ्चालित प्रादेशिक महोत्सव २०७५ अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट महोत्सव भएको छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको प्रादेशिक महोत्सव २०७५ नारामा मात्र नभइ व्यवहारमा समेत देखाएको छ।
संघले मेलामा कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, सुचना प्रविधि, उद्योग र व्यापारको प्रवद्धन गर्ने खालका स्टलहरू राखी महोत्सवकै सोभा बढाएको भारत लखनउबाट मेला हेर्न आएका अजय यादवले बताए। मेलामा स्थानीय उत्पादन लाई विशेष स्थान दिइएको छ।
फागुन २९ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन तथा वस्तुलाइ प्राथमिकता दिएका कारणा स्थानीय पन देख्न सकिन्छ। यसका अलवा पर्यटन, कृषि, जलविद्दुत, आकर्षक गाडिहरू, लुगा कपडा, बालबालिकाका लागि मनोरञ्जन दिने खालका समाग्रीहरू रहेका छन्।